Abuur palette midabka ugu fiican leh shantaan qalab webka | Abuurista khadka tooska ah
5 qalabka webka oo kaa caawin doona inaad doorato palette midabka ugu fiican
Manuel Ramirez | | Qalabka Naqshadeynta, Waraaqaha midabaynta
Mar kasta oo aan helno qalabka webka ugu fiican la heli karo si loo fuliyo dhammaan noocyada shaqooyinka noo oggolaanaya inaan nafteenna ka badbaadinno inaan dhex dhigno rakibidda barnaamij ballaadhan kombiyuutarkayaga.
Waxaa ka mid ah agabyada websaydhkan loogu talagalay naqshadeeyayaasha qaarkood loogu talagalay jiilka midabada midabka leh taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan ku garaacno furaha midig ee hooska menu kala duwan, icons iyo walxo kale oo samayn kara degel. Waa kuwan shan kuwaas oo hubaal ah inay soo galaan.
2 Sawir la'aan
4 Midab Bireeye
Qalabkan websaydhku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sameysatid palette kuu gaar ah iyada oo ku saleysan midab kasta oo la xushay. Iskuxirku wuxuu leeyahay dhammeystir weyn waana mid dareen leh marka la isticmaalayo midabbo ama midabbo ku dhow.
Mid ka mid ah xulashooyinkaagu waa awood ka dooro noocyo midabyo aan kala sooc lahayn oo ka faa'iideysta xulashada uu aaladda webka Paletton bixiyo.
Qalabkan waxaa lagu gartaa jiilkii palettes ee sawirka aad soo gelisay. Sawirka laga soosaaray palette aasaasiga ah oo ka kooban shan midab. Faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah inaan helno wanaag asal ah, waana awoodda aan sawir kaga qaadno taleefankaaga casriga ah si aad ugu dirto emayl iyo in shirkadda Pictaculous ay mas'uul ka tahay soo saarista palette. Xitaa faahfaahinta ay soo saari karto waxaa ka mid ah xeerarka hex.
Hadda, haddii waxa aan raadineyno ay yihiin qalab nagu dhiirrigeliya a warqad weyn oo palettes wadaag ah by naqshadeeyayaasha kale ee jecel nuxurka noocan ah. Raadinta ay bixisay Pitts, waxaad u kala saari kartaa jaantusyada kuwa cusub ama kuwa ugu caansan, si aad u ogaato kuwa ugu isticmaalka badan iyo kuwa cusub ee ay bixiyeen isticmaaleyaasha kale.
Haddii aad raadineyso inaad abuurto a nidaam midab dhammaystiran, hubaal Midabka Midabku waa midka saxda ah. Waxay abuurtaa palette 6-midab leh oo ka soo jeeda midabka aasaasiga ah ee la xushay.
Waxaad ikhtiyaar u leedahay tafatir midabada shaqsiga ee la soo saaray haddii loo baahdo.
Barnaamijkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad isticmaasho tilmaamaha jiirka si uu u siibto shaashadda guud ahaan illaa aad ka heleyso midabka midabka la doonayo si aad u nuquliso nambarka hexadecimal oo hal guji leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Waraaqaha midabaynta » 5 qalabka webka oo kaa caawin doona inaad doorato palette midabka ugu fiican
Sawirro Shimbiro leh oo Realistic ah oo uu sameeyay Johan Scherft
Surrealism ee sawirka Flora Borsi